पत्रकारिताले सोसल मिडियासँग जुध्नुपर्छ– रासस पूर्वअध्यक्ष विष्ट (Interview)
काठमाडौँ, १६ असोज (रासस) ः नेपाली पत्रकारिताको खासै विकास नभएको र राष्ट्रिय समाचार समिति केवल वामे सर्दै गरेको अवस्थामा राससमा अङ्ग्रेजी समाचारदाताका रुपमा प्रवेश गर्नुभएका राधेश्याम विष्टले आफ्नो पत्रकारिता र अङ्ग्रेजी भाषाको ज्ञानले राससलाई समृद्घ मात्र बनाउनुभएन यसलाई अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक जस्तो नेतृत्वदायी पदमा बसेर २०३० देखि २०४२ सम्म १२ वर्षसम्म हाँक्नुभयो । हरेक पदमा प्रतिस्पर्धा गरेरै पुग्नुभएका विष्टले आफ्नो क्षमताको प्रदर्शन गर्दै नेपालको इतिहासमै सरकारको प्रथम प्रवक्ताको जिम्मेवारी पनि सम्हाल्नुभयो । राष्ट्रिय अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्नाका साथै राससलाई संस्थागतरुपमा मजबुत बनाउँदै नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रमा योगदान गर्नुभएका सक्षम पत्रकार तथा प्रशासक विष्ट उमेरले ७५ पार गरिसक्नुभए पनि अझै पनि सक्रिय बौद्धिक व्यक्तित्वका रुपमा काम गरिरहनुभएको छ । उहाँसँग राससका प्रमुख समाचारदाता तीर्थ भट्टराईले उहाँकै निवास सानेपा, ललितपुरमा सोमबार लिएको अन्तर्वार्ता
१) यहाँको जन्म कहिले र कहाँ भएको हो ? पारिवारिक पृष्ठभूमिबारे बताइदिनुहुन्छ कि ?
२) शिक्षा कहाँबाट प्राप्त गर्नुभयो ?
३) रासससँग कहिले र कसरी संलग्न हुनुभयो ? पत्रकारिता पढ्नुभएको थियो कि ?
म एमए पढ्दै गर्दा नै २०१९ मा राससमा विज्ञापन खुलेको थाहा पाएर निवेदन दिएँ । अङ्ग्रेजी समाचार लेख्न जान्नेको आवश्यकता भनेर गोरखापत्रमा विज्ञापन प्रकाशन भएको थियो । त्यहाँ लिखित परीक्षा र अन्तर्वार्ता भएपछि हामी चार जना पास भयौँ । म समेत अरु गोकुल पोखरेल, गोविन्द प्रधान र पदमराज सुवेदी पास भएका थियौँ । पोखरेल राससका कार्यवाहक महाप्रबन्धकसम्म हुनुभयो भने प्रधान अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक हुनुभयो । भोजपुरका सुवेदी भने रासस छोडेपछि सरकारको सचिव पनि हुनुभयो ।
४) यहाँ राससमा सर्वप्रथम आउनुहुँदा राससको अवस्था कस्तो थियो ? कसरी चलेको थियो ? यसको कतिको महत्व थियो ?
५) अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक कहिले हुनुभयो ? सो समयमा विदेशी समाचार संस्थासँग कस्तो सम्बन्ध थियो ?
६) आफ्नो कार्यकालमा राससमा के कति कार्य गर्न सफल हुनुभयो ? गर्न नसकिएका केही कुरा भए बताइदिनुहुन्छ कि ?
७) राससको स्थापना र उन्नतिमा कसकसको विशेष योगदान सम्झनुहुन्छ ?
८) राससमा पुराना दिनका कुनै उल्लेखनीय घटना वा स्मृति छन् कि ?
९) राससको राजदरबारसित कस्तो सम्बन्ध थियो, राजा वीरेन्द्रले राससलाई कसरी हेर्नुहुन्थ्यो ? केही निर्देशन दिनुहुन्थ्यो कि ?
राजदरबारसित सम्बन्ध राम्रो हुन्थ्यो तर राजा वीरेन्द्रले प्रत्यक्ष निर्देशन भने दिनुभएन । उहाँलाई प्रथम पटक सवारीका क्रममा धनकुटामा भेटेको थिएँ । पछि सुर्खेतमा पनि भेटेँ । सो बखत दुई कुरा भनेँ, एउटा हो, विकास सर्वसाधारणलाई भएन, उनीहरुका लागि पनि हुनुप¥यो र समावेशी हुनुप¥यो भनेँ र अर्को सेनालाई पनि विकासमुखी बनाउनुपर्छ भन्दा उहाँले ठीक छ म त्यो गराउँछु भन्नुभयो । उहाँ छलफल गर्न तयार हुनुहुन्थ्यो । प्रधानमन्त्री तुल्सी गिरीसँग पनि पञ्चायतलाई विकास गर्दै लानुपर्छ भनेर छलफल हुन्थ्यो तर उहाँ भने यस्तो कुरा मान्नुहुन्नथ्यो ।
१०) तपाईँको कार्यकालमा सञ्चार मन्त्रालयबाट कस्तो सहयोग हुन्थ्यो, हस्तक्षेप कत्तिको हुन्थ्यो ?
११) राससलाई सर्वग्राह्य र प्रभावकारी समाचार संस्था बनाउन के गर्नुपर्छ ? यो कुन मोडलमा चल्नुपर्छ ?
आफ्नै मोडलमा चल्नुपर्छ । कसरी विश्वसनीय बनाउने, फ्याक्ट चेकिङ मेकानिज्म, क्रस चेकिङ हुनुप¥यो, प्रोपोगाण्डा र समाचार छुट्याउन सक्नुप¥यो । आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्नुप¥यो र स्तरीय पत्रकारिता गर्नुप¥यो । समाचारमा विविधता र समावेशिता हुनुप¥यो । समाचारका स्रोतमा विविधता हुनुप¥यो । रिपोर्टरको हातमा नाइट कमिशनको रिपोर्टको ह्याण्डबुक हुनुप¥यो । अग्रगामी प्रवृत्तिलाई अवलम्बन गर्नुप¥यो । जनसाधारणलाई पनि शिक्षित गर्नुप¥यो प्रोपोगाण्डा के हो र समाचार वा तथ्य के हो भनेर । रिपोर्टरलाई तालीम र अभिमुखीकरण हुनुप¥यो । अहिले सञ्चारमाध्यमको विश्वसनीयता घटिरहेको बेला राससले विश्वसनीयता बढाउनुप¥यो ।
१२) यहाँ राससबाट निवृत्त भएपछि तत्कालीन श्री ५ को सरकारको प्रथम प्रवक्ता बन्नुभएको थियो । त्यो कसरी सम्भव भयो ?
१३) नेपालको पत्रकारिता क्षेत्रको विकासमा ककसको योगदान महत्वपूर्ण रहेको यहाँलाई लाग्छ ?
१४) अहिलेको नेपाली मिडियाको भूमिकाबारे यहाँको मूल्याङ्कन कस्तो छ ? पहिलेको तुलनामा केही फरक आएको छ कि ?
१५) विगतमा विश्व सूचना प्रणाली कस्तो थियो ? यो कसरी परिवर्तन हुँदै आयो ? हाम्रो जस्तो देशमा समाचारलाई विश्वसनीय बनाउन के गर्नुपर्छ ?
युनेस्कोको रिपोर्टलाई अमेरिकाले विरोध गरेको थियो र यही निहुँमा युनेस्को नै छाड्यो तर पछि पुनः संलग्न भयो । अहिले पनि सूचना अव्यवस्था छँदैछ । कुसूचना, अफवाह आदिबाट संसार पीडित छ । अमेरिकामा पनि नाइट मिडिया फोरम गठन भएको छ । यस्तो बेला पत्रकारका लागि युनेस्कोको जस्तो ह्याण्डबुक चाहिन्छ । प्रविधि, मिडिया र राजनीतिले गर्दा कुसूचना व्याप्त छ । गलत समाचार प्रसारण हुने सम्भावना छ । युनेस्कोको जस्तो ह्याण्डबुक हामीलाई पनि आवश्यक छ । डिजिटल र सोसल मिडियासँग कसरी लड्ने थाहा हुनु आवश्यक छ । सबैमा मिडिया लिटरेसी हुनुप¥यो । तथ्य जाँच विधि हुनुप¥यो । सूचना यस्तो हुनुप¥यो जसलाई जाँच गर्न सकियोस् ।